Shaampiyoonaa mana keessaa addunyaa Itiyoophiyaan sadarkaa lammaffaa qabattee xumurte
Finfinnee: Bitootessa 12, 2008 (oromiapo) Shaampiyoonaa mana keessaa addunyaa 16ffaa kaleessa galgala xumura argate Ameerikaa Poortlaanditti geggeeffame Itiyoophiyaan addunyaa irraa sadarkaa lammaffaa qabattee xumurteetti.
Sanbat duraa Itiyoophiyaan meetira 1,500 dubartootaan medaaliyaa birrii fi maaldaa argachuu dandeesseetti.
Atleet Daawwwit Siyyum (minitii 04 sakandii 04 fi maayikroo sakandii 09) akkasumas Gudif Tsaggaayee (minitii 04 sakandii 05 fi maayikroo sakandii 71 waliin) dhalootaan Itiyoophiyaa lammummaan Neezarlaand kan taate Atleet Siifaan Hasanitti aananii seenaniiru.
Dorgommii meetira kuma 3 kaleessa geggeeffame Atleet ganzabee Dibaabaa fi Masarat Daffaar walitti aananii galuun Itiyoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee fi birrii argamsiisaniiru.
Ganzabeen dorgommicha minitii 8 sakandii 47 fi maayikroo sakandii 43 waliin seenuun tokkoffaa taate wayita xumurtu, dorgommicha xumuruuf minitii 8 sakandii 54 fi maayikroo sakandii 26 kan itti fudhate Masarat Daffaar ammoo Ganzabeetti aantee medaaliyaa birrii biyyasheef argamsiifteetti.
Dabalataanis Yoomiif Qajeelchaa dorgommii meetira kuma 3 dhiirotaa minitii 7 sakandii 57 maayikroo sakandii 21 waliin adda duree ta’ee xumuruun Itiyoophiyaadhaaf medaaliyaa warqee lammaffaa argamsiiseera.
Shaampiyoonaa addunyaa mana keessaa 16ffaa kana Itiyoophiyaan walumaagalatti warqee 2 birrii 2 fi maaldaa 1 argachuun sadarkaa lammaaffaa qabattee xumuruu dandeesseetti.
Ameerikaan gamasheetiin warqee 13, birrii 6 fi maaldaa 4 sassaabuun addunyaa irraa adda duree taatee xumurteetti.
Itiyoophiyaatti aanuun Firaans warqee 1, birrii 1 fi maaldaa 2 argachuun sadarkaa sadaffaa qabattee xumurteetti.
More in this category: « Ijaarsi buufata xiyyaaraa Shiree dhibbantaa 45 xumurame Yaa’iin Qorannoo fi Qorannoo ‘TB’11ffaan har’a Magaalaa Dirree Dawaatti jalqabama »
Torbe Kana 1675
Ji'a Kana 1675
01/05/07 irraa eggalee 3422846
Kan Amma Daawwachaa Jiran 21